Instagram waxay galeysaa suuqyada oo dhan si ay ula tartamaan | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Naqshadeynta Webka, shabakadaha bulshada
Instagram waxay sii wadaa bilawga daboolka wargeysyada iyadoo cusbooneysiin cusub. Cusboonaysiinta cusub ee aan ahayn "Ciladaha hagaajinta iyo hagaajinta waxqabadka" gabi ahaanba, sidoo kale. Iyo, maalmihii ugu dambeeyay waxaan maqalnay dhowr war oo aan halkaan ku sheegeyno. Xaqiiqdii, isticmaaleyaasha shabakaddu waxay yiraahdaan mar horeba way ka warqabaan, maadaama ay hadda isticmaali karaan. Laakiin dhammaan cusbooneysiintu ma soo bixin oo waxay raadin doonaan dhammaan noocyada suuqyada si ay ula tartamaan.
Suuqyada instagram-ka soo galayaan ayaa aad uga duwan wixii markii hore loogu tala galay Tani waa mid aad uga fog inuu noqdo shabakad bulsheed oo lagula xiriiro dadka kale, waxay taageertaa fikradda telefishanka cusub. Ficil la daawado Telefishanka IGTV ayaa xaqiijinaya, laakiin isagoon rabin inuu ka leexdo taageerayaasha uu ku weynaaday. Ka dib oo dhan, nashqadeeyayaasha iyo adduunka sawirka "taagan" ayaa u bixiyay magaceeda. Hadda ah nashqadeeyayaasha iyo sawir qaadayaasha waxay awoodi doonaan inay si toos ah uga iibiyaan wax soo saarkooda dukaanka instagram.
1 Waa maxay IGTV?
2 Ku iibinta alaabada instagram
Waa maxay IGTV?
Si fudud Instagram telefishanka. Marka la eego cabashadaas oo dhan ee ka timid isticmaaleyaasha kaliya awood u leh inay muujiyaan naftooda 15 ilbidhiqsi ee sheekooyinka iyo hal daqiiqo oo ah waqtiga qalabkan ayaa soo baxay. Hadda abuurayaashu waxay abuuri karaan fiidiyowyo toosan asalka ah sida YouTube. Fiidiyowyadan waxay yeelan doonaan ugu badnaan hal saac. Wax si cad ula tartamaya suuqa YouTube.
Si loo helo shaqadan waxay ku darsadeen astaanta telefishanka midigta sare. Halkaas waxaad ku arki kartaa dadka aad raacdo 'kanaalkooda'. Haddii aadan midna haysan, Instagram waxay bixisaa dad la soo jeediyay oo haddii kiiskaaga adigu tahay adiga oo doonaya inaad wax abuurto, shaashadda dejinta, dhagsii oo 'samee channel'. Waxay ku weydiin doontaa inaad aqbasho qawaaniinta isticmaalka qaybtaan Instagram iyo voila, waxaad horay u leedahay kanaalkaaga.
Sidoo kale waa in la yiraahdaa kuwani maahan fiidiyowyo toos ah sida kuwa ilaa hadda ku jiray 'Sheekooyinka'. Mawduucan waxaa laga yaabaa inay leedahay daabicid hore iyo shaqo faahfaahsan laakiin qaabka toosan. Xaqiiqdii, sida shabakaddan bulsheed, isticmaaleyaashu way ka tagi karaan faallooyinkooda waana suurtagal in la arko inta qof ee aragtay waxa la daabacay, laakiin kaliya lambarka, maahan magaca magaca sida aad ku arki karto 'Sheekooyinka'.
Dabcan, xilligan ma heli doontid nasiibkaa inaad ku dalbatid aragtiyada, inkasta oo yaa garanaya haddii mustaqbalka, sida ku dhacday YouTube waan awoodi doonnaa inaan aragno 'Macallimiinta'Si toos ah ugu amraya nidaam qarsoodi ah sida barnaamijka Google.
Ku iibinta alaabada instagram
Instagram waxay ka shaqeyn doontaa cusbooneysiinta xigta ee muhiimka ah ee iibinta alaabada. Waqti ka hor waxaan aragnay sida ay u dhigtay xiriiriyeyaasha iibsiga, oo isticmaalkeedu uusan muhiimad weyn u lahayn. Laakiin markan ma noqon doonto isku xirnaan fudud dukaamada dibadda sidii hore. Hada waa fulin doonaa nidaamka wax iibsiga ee ku jira dalabka laftiisa.
Tani waxay ka dhigan tahay in astaamaha sawir qaadayaasha ama naqshadeeyayaasha ay awood u yeelan doonaan inay shaqadooda geliyaan oo keliya inay muujiyaan, laakiin si toos ah uga helaan dakhli. Markaa uguyaraan waxay ka kiciyeen xafiisyada Zuckerberg -Instagram section-.
Instagram waxay noqotay wado lagula xiriiro oo toos loogu iibiyo macaamiishaada. Haddii aad ku xirto kun ama toban kun oo qof shey ama fikrad aad iibin karto, markaa waxaad leedahay suuq
Instagram waxay rabtaa inay u oggolaato adeegsadayaasheeda inay si toos ah uga dhex iibsadaan shabakadda bulshada oo u isticmaal inaad ku bixiso alaabada iyo adeegyada kala duwan, aad ugu eg waxa tartankiisa WeChat ku bixiyo Shiinaha. Cusbooneysiintan suurtagalka ah waxay imaaneysaa kadib abuuritaanka astaan ​​gaar ah oo loogu talagalay naqshadeynta Instagram, taas oo muujineysa rabitaanka ka timaadda barxadda si bulshadan ay u koraan. Faahfaahin sida kiisaska kale waxaa sameeyay Google, YouTube iyo Instagram lafteeda si loogu soo rogo waxyaabaha ugu xiisaha badan xilligan. Xusuusnow shaqada naqshadeeyayaasha si ay u kobciyaan bulshadan iyada oo loo marayo astaanta rasmiga ah @Design
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Instagram waxay galeysaa dhammaan suuqyada si ay ula tartamaan
Sida loo doorto kiniin garaafka ah si loo qaabeeyo